Voina · Aogositra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Voina · Aogositra, 2011
Tantara mikasika ny Voina tamin'ny Aogositra, 2011
Côte d'Ivoire : Misaona i Abidjan Taorian'Ilay Loza Mahatsiravina Niseho.
Afrika Mainty 11 Aogositra 2011
Andro manjombona ho an'i Cote d'Ivoire ny andro Zoma 5 aogositra. Olona 40 no namoy ny ainy ary sivy naratra noho ny fianjeran'ilay fiara tao anaty hantsana Ebrié niaraka tamin'ny mpandeha rehetra tao anatiny fitateran'olona an'ny orinasa mpitatitra Abidjaney (SOTRA) mampitohy ny faritra ao Vridi sy Adjamé . Namoaka didy 3 andro...
Korea Atsimo : 41 No Maty Tao Anatin'ny Tondra-drano Mahery Vaika Sy Fihotsahan'ny Tany
Azia Atsinanana 07 Aogositra 2011
Oram-batravatra be no namely an'i Korea Atsimo nandritra ny andro maro nifanesy, nahatonga firotsahana tany, tondra-drano ary fahatapahan-jiro. Farafahakeliny 41 ny olona maty ary 12 no mbola tsy hita hatramin'izao. Nandritra ilay loza voajanahary, Koreana Tatsimo maro no nizara fanavaozam-baovao, sary maro ary toro-hevitra mahasoa ho an'ireo tra-doza tamin'ny alalan'ny Twitter.